नोट च्यात्नुभयो भने अब ३ महिना जेल, अरू के के छन् त नयाँ व्यवस्था – Makalukhabar.com
हिलोले अस्तव्यस्त चाबहिल–मित्रपार्क सडक, कहिले हुन्छ निर्माण पुरा ? (भिडिओसहित)
नोट च्यात्नुभयो भने अब ३ महिना जेल, अरू के के छन् त नयाँ व्यवस्था
काठमाडौँ । कसैलाई देखाउन वा रिसको झोकमा नेपाली नोट च्यात्ने गर्नुभएको छ ? त्यस्तो बानी छ भने होसियार । तपाईँले १ रुपैयाँको नोट च्यात्नुभयो भने ३ महिना जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गरी हालै संसदले पारित गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७३ को दफा २६३ मा बैङ्क नोट वा सिक्का केरमेट, जलाउन, गाल्न, च्यात्न वा बैङ्क नोटमा लेख्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी नोट तथा सिक्का केरमेट गर्ने, जलाउने, गाल्ने र च्यात्नेलाई सो दफाको उपदफा २ मा जरिवाना र ३ महिनासम्म जेलको सँजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब कसैले नोटमा लेखेमा वा कोरेमा फौजदारी कानुन उल्लङ्घन भएको मानिने छ । र, सोही अनुसार कारबाही हुनेछ । सफा नोट नीति अंगालेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वर्षदेखि नोटमा स्टिज लगाउन पनि प्रविबन्ध गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा नोट सफा राख्न निर्देशन समेत दिँदै आएको छ ।
अपराध संहिता अनुसार कसैले खोटा अर्थात् नक्कली मुद्रा बनाउन वा बनाउने उद्योग गर्नु हुँदैन । त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई मुद्राको परिमाण र मूल्य विचार गरी पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैंयादेखि १ लाख रुपैंयासम्म जरिबाना हुनेछ ।
कसैले खोटा मुद्रा हो भन्ने जानी जानी सद्दे सरह चलन गर्ने नियतले त्यस्तो मुद्रा खरिद वा विक्री गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, लेनदेन गर्न, सद्दे सरह चलनमा ल्याउन वा सो गर्न उद्योग गर्न वा आफूसँग राख्न नहुने संहितामा उल्लेख छ । यस्तो, कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैंयासम्म जरिबाना समेत हुनेछ ।
त्यसै गरी, संहिताअनुसार सद्दे सरह व्यवहारमा चलाउने नियतले वा सो हुन सक्तछ भन्ने जानी जानी कसैले धातुबाट बनेको मुद्राको तौल घटाउन वा धातुको अंश फरक पार्न वा एक किसिमको मुद्रालाई अर्को किसिमको मुद्रा हो भन्ने भान पार्ने गरी निकासी वा पैठारी गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन । यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैंयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।